Ellicott Dredgers ayaa loo adeegsaday si loo qodo harada Seminole & wanaajinta caafimaadka harada
Ellicott Dredgers waxay hagaajineysaa caafimaadka harada
Laba ceel oo loo yaqaan 'Ellicott' ayaa loo isticmaalay qayb ka qodaya mashruuca dib u soo celinta Lake Seminole ee Gobolka Pinellas, Florida. Doomaha - Ellicott 670HP 14 ”cutterhead caadiga ah iyo Ellicott 370HP 10” cutterhead caadiga ah - waxay si wada jir ah uga wada shaqeeyeen sidii meesha looga saari lahaa qashinka dabiiciga ah ee ururay kaas oo hoos u dhigay tayada biyaha harada.
Harada 684-hektar waxaa buux dhaafiyay muck kaas oo ceegaaga nafaqooyinka biyaha. Waxa kaliya ee badbaadi karay waxay ahaayeen algae, oo dilayay kalluunka harada. Si loo joojiyo loona soo celiyo dhibaatada, qaybta qodista ee mashruuca waxaa loo qorsheeyay in laga saaro 900,000 yarooyin cubic yards ah 24 bilood.
Gator Dredging of Clearwater, FL waxay soo iibsatay qodayaasha, oo ay ugu magac dareen "Jessie Marie II" (670 Dragon® dredge) iyo "Miranda Jo" (370 Dragon® dredge), waxayna ku dhammeeyeen mashruuca nuska waqtiga. Qoditaanka Haydarooliga wuxuu ka billowday Waqooyiga Lobe ee harada wuxuuna u tallaabay dhanka Koonfurta illaa Park Blvd oo u dhow.
Kahor mashruuca intaan la bilaabin, Gator Dredging wuxuu diyaariyey aagga isagoo dhisaya aag 27 hektar ah halkaasoo la dhigay 900,000 kun oo mitir kiyuubik oo faashad dabiici ah. Ugu dambeyntiina, degmadu waxay qorsheyneysaa inay u isticmaasho aagga garoomada cayaaraha madaddaalada ama waddooyinka socodka.
670 Taxanaha Dragon® waa qod-jeex-jeex jeex jeexan goobeed oo si fudud loo qaadi karo loona ururin karo. Qulqulka noocani wuxuu ku habboon yahay milkiile kasta oo qoda ama hawlwadeenka doonaya inuu iibsado markab si fudud loo isticmaali karo. 670-ka waxaa caadi ahaan loo adeegsadaa mashaariicda hagidda ee dekedaha yaryar, wabiyada, iyo mashaariicda biyo-mareenka dhulka hoostiisa ah.
Taxanaha 370 Dragon® dredge waa cabbirka cabbirka cabbirka baaxadda yar, oo inta badan loo isticmaalo qodidda harooyinka, dayactirka marinnada iyo marinnada maraakiibta, dayactirka kanaalka, ilaalinta xeebta & ilaalinta xeebta iyo dib u soo celinta meelaha dhoobada iyo dhirta qoyan.
Lake Seminole - oo ah harada labaad ee ugu weyn Pinellas County - waa goob caan ah oo lagu madadaalo mashruuca qodista ee muhiimka ahna sidoo kale wuxuu hagaajiyay tayada biyaha harada si loogu isticmaalo aadanaha.
Source: Wararka Bay, Dredgewire